सर्वोच्चका न्यायाधीशको अक्षमताले ३५,००० मुद्दाको खात, नागरिक विद्रोह रोक्न उच्चका काबिल न्यायाधीश खटाउन सकिने | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
सर्वोच्चका न्यायाधीशको अक्षमताले ३५,००० मुद्दाको खात, नागरिक विद्रोह रोक्न उच्चका काबिल न्यायाधीश खटाउन सकिने
मुद्दाको ज्येष्ठताका आधारमा पुराना मात्र मुद्दा हेरिए भने आउँदो १० वर्षमा सर्वोच्चमा १ लाखभन्दा बढी मुद्दाको खात लागिसकेको हुनेछ
२०७९ बैशाख १७, शनिबार १८:४८:००
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले ३५ हजार मुद्दा थुप्रिएर बसेका छन् । न्यायाधीशहरुले मुद्दाको पयो समाउन सकेका छैनन् । अनायासै कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले झन् कहाँबाट काम थाल्ने र कहाँ पुगेर जिम्मेवारी बिसाउने भन्ने भेउ नपाएको देखिन्छ । न्यायाधीश रनभुल्ल पर्नु भनेको देशको न्यायालय नै अन्योलग्रस्त हुनु हो । यसले पनि न्यायिक प्रक्रिया पनि लथालिंग छ भन्ने दर्शाउँछ ।
दैनिक २ सय हाराहारी मुद्दा पेसीमा चढ्दा १० प्रतिशतले पनि पालो पाउँदैनन् । यही गतिमा मुद्दाको सुनुवाइको क्रम चल्ने हो भने अहिले सर्वोच्च अदालतमा कुनै गुनासो लिएर पुग्ने सर्वसाधारणले आफ्नो जुनीभर निर्णय सुन्न पाउने छैन । सर्वोच्चमा विचाराधीन अहिलेका ३५ हजार मुद्दा सकिन कम्तीमा १० वर्ष लाग्नेछ । यो पनि त्यस्तो अवस्थामा मात्र सम्भव हुनेछ, मानौँ न्यायाधीशहरुले यसअघि दर्ता भएका मुद्दा मात्र हेर्नेछन् र सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा आउने छैनन् ।
जब मुद्दाको ज्येष्ठताका आधारमा पुराना मात्र मुद्दा हेरिए भने आउँदो १० वर्षमा सर्वोच्चमा १ लाखभन्दा बढी मुद्दाको खात लागिसकेको हुनेछ । यसबीचमा प्रतिनिधि सभा विघटन वा गभर्नर प्रकरणजस्ता राजनीतिक मुद्दा घुसेमा जनताका मुद्दाले पालो पाउने छैन । जनताका आशा र आवाज त्यसै कुल्चिइनेछन्, जसरी अहिले कुल्चिइँदै छन् । ती १ लाख मुद्दाका बीच जनताको गुनासो केवल अरण्यरोदनमा परिणत हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतकै वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा सर्वोच्चको औसत मुद्दा फर्स्योट दर १३ प्रतिशत छ । यो दर निरन्तर खस्कँदो छ । अहिले गोला प्रणाली लगाइएकाले न्यायाधीशमा मुद्दाप्रति लगाव झन् घट्दै गएको छ । मन परेका मुद्दा परेमा हेर्ने, नभए हेर्न नभ्याइने वा नमिल्ने भनेर पन्छाउने प्रवृत्ति छ । यसले मुद्दाको बोझ झन् बढाउँदै लगेको छ । पुराना मुद्दाको खात झन् थपिँदै छ । वर्षमा औसत ५० प्रतिशत नयाँ मुद्दा थपिन्छन् र १३ प्रतिशत मात्र फर्स्योट हुन्छन् । यही क्रम रहेमा मुद्दा संख्या १ लाख पुग्न अब तीन वर्ष पनि लाग्ने छैन । त्यस अवस्थामा एकपटक दायर भएको मुद्दा सुनुवाइको पालो वर्षमा एकपटक आउन पनि मुस्किल पर्नेछ । किनभने अहिले ३५ हजार मुद्दा हुँदा नै सर्वसाधारणले मुद्दामा पालो पाउन ५ महिना कुर्नुपर्ने भइसकेको छ । ५ महिनामा पालो पाउँदा पनि सुनुवाइ हुन्छ नै भन्ने छैन । एकपटक सुनुवाइ हुँदैमा मुद्दामा कुनै आदेश वा फैसला भइहाल्छ भन्ने पनि छैन ।
सर्वोच्चको कार्यबोझ यही गतिमा बढ्यो र कार्यशैली पनि यही रह्यो भने यो देशमा ठूलो विद्रोह वा वितण्डाको कारण अब न्यायालय बन्न सक्नेछ । यसै पनि प्रधानन्यायाधीश प्रकरणदेखि अनेक कारणले न्यायालयप्रति जनास्था खस्किँदै गएको छ । नागरिकका समस्याप्रति बेपर्वाह राज्य संरचनाभित्र न्यायालय सबैभन्दा गैरजिम्मेवार देखिन थालेपछि बाँकी के रह्यो र ? सबैतिरबाट पीडित र प्रताडित भएपछि न्यायको शीतलता प्राप्त गर्न आउने नागरिक न्यायालयबाट थप प्रताडित हुने भएमा त्यो पीडा आक्रोशमा बदलिन समय लाग्ने छैन । तसर्थ दुर्घटना नहुँदै सोच्नु जरुरी छ ।
अहिले पदमा भएका वा नेतृत्वमा पुगेका न्यायमूर्तिलाई लाग्दो हो, अबका केही महिनामा अवकाश पाइहाल्छु । जसोतसो जागिर कटाउँछु । त्यसपछि यत्रै सित्ति । तर न्यायालयप्रति वितृष्णा बोकेको जनआक्रोशले कुनै बहालवाला वा भूतपूर्व भनेर छुट्याउने छैन । २०६१ भदौ १६ मा राजधानीमा भएको वितण्डा सम्झिए पुग्छ । त्यतिखेर अराजक भिडले ककसलाई कसरी निशाना बनाएको थियो ? अब न्यायालयबाट जन्मिने वितृष्णापछिको विद्रोहले देशव्यापी रूप लिन सक्नेछ र त्यसले बहालावालादेखि भूतपूर्व न्यायकर्मीहरूका धुरी उछिट्याइदिन सक्नेछ ।
हरेक न्यायमूर्तिले सोचौँ, नेपालगन्ज वा डोल्पाको कोही नागरिक सर्वोच्च अदालतबाट वर्षौँसम्म झुलाउने र न्याय दिन्छु भनेर ठगिरहन मिल्छ ? आफ्नै आत्मालाई साक्षी राखेर हेरौँ, वास्तवमा ती नागरिकमाथि अदालतबाटै ज्यादती भएको छ कि छैन ? अनि तिनै नागरिकले तिरेको करबाट मासिक औसत ६ लाख रुपैयाँ न्यायाधीशहरुले पाउँछन् । के त्यस करको सदुपयोग भयो ? ती करदाताप्रति न्याय भयो त ? तसर्थ एक वर्ष वा एक महिना होइन, एक दिन मात्र कार्यकाल बाँकी छ भने पनि ती निन्याउरा अनुहार, जो अन्यायबाट पीडित छन् र सर्वोच्च अदालतअगाडि हात पसार्न आइपुग्छन्, तिनलाई न्याय दिने अठोटसहित केही पहलकदमी लिऔँ ।
सर्वोच्चमा अहिले न्यायाधीश कम भएर मुद्दा थुप्रिएका होइनन् । न्यायाधीशले काम नगरेर यसो भइरहेको हो । अझ भन्दा काम गर्ने ल्याकत नभएका न्यायाधीशको भिड जम्मा गरेका कारण न्याय बिथोलिएको छ । यो कुरा नेपाल बार एसोसिएसनले लिखित रुपमै बुझाइसकेको छ । सर्वोच्चमा अहिले पनि आलाकाँचा न्यायाधीश छन् । तिनले मुद्दा बुझ्दैनन् । आदेश लेख्न जान्दैनन् । तिनलाई लामो समयको तालिममा पठाउनु आवश्यक छ । खासगरी पार्टीको कोटामा र प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषदका पदाधिकारीको खल्तीबाट नियुक्त न्यायाधीशहरुको यस्तो हविगत छ । तिनलाई प्रशिक्षणमा पठाएर उच्च अदालतमा थोरै कार्यकाल बाँकी भएका तर काविल न्यायाधीशलाई निश्चित समय र जिम्मेवारी तोकेर सर्वोच्चमा ल्याउनुपर्छ । यदि संविधानले त्यो बाटो दिएको छैन भने व्यापक जनताको न्याय पाउने हकका निम्ति संविधान संशोधन वा बाधा अड्काउ फुकाउको बाटो रोज्न सकिन्छ ।
एकाध वर्ष मात्र कार्यकाल बाँकी भएका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा तान्ने हो भने तिनले मुद्दा फर्स्योटको दर बढाउनेछन् । विशेष कार्ययोजनासहित लक्ष्य तोकेर उनीहरुलाई काममा खटाउने हो भने न्यायले गति पाउनेछ । न्यायका अपेक्षीहरुको मुहारमा खुसी छाउनेछ । राज्य हुनुको सार्थकता रहनेछ । करदाताले कर तिर्नुको औचित्य देखिनेछ । अहिले तत्कालै सर्वोच्च तान्न सकिने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरुमा शेषराज सिवाकोटी, विनोद शर्मा,डिल्लीराज आर्चाय , प्रेमराज कार्की, मुहम्मद साविर हुसैन, सत्यमोहन जोशी थारु, रत्नबहादुर बागचन्द, वीरबहादुर डाँगी, प्रेमराज ढकाल, गुणराज ढुंगेल, माधवप्रसाद पोखरेल, महेशप्रसाद पुडासैनी, कुलप्रसाद शर्मा, ऋषिराम दवाडी ,रमेश कुमार पोखरेल,शारंगा सुवेदी,टेकनारायण कुवर लगायत छन् ।
उनीहरूलाई सर्वोच्चमा स्थायी नियुक्ति पनि दिनुपर्दैन । उच्च अदालतमा फर्काउनु पनि पर्दैन । लक्ष्यअनुसार मुद्दा फर्स्योट गर्नेलाई सर्वोच्चकै स्थायी न्यायाधीश बनाए भयो । लक्ष्य नपुग्नेलाई उच्च अदालतकै न्यायाधीशसरह सुविधा दिएर ६५ वर्षकै उमेरमा विदा गरे भइहाल्छ । यसमा उनीहरुको चित्त दुःखाइ रहने छैन ।
उच्च अदालतमा रहेका कर्मचारी पृष्ठभूमिका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा तान्नेबित्तिकै सर्वोच्चको न्याय सम्पादनको गुणस्तर उकासिनेछ । फैसलाको स्तर पनि सुध्रिनेछ । सर्वोच्चका सिकारु न्यायाधीशले पनि सिक्ने मौका पाउनेछन् । तसर्थ कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कोठे घेराबाट बाहिर निस्केर यस्ता बृहत्तर हित र सरोकारका उपायमा लाग्नुपर्छ । उनले यसो गर्न सकेमा नेपालको न्यायिक इतिहासमा उनको नाम सम्झिइनेछ । होइन भने सर्वोच्चको भित्तामा तस्बिर पनि झुन्ड्याउन भावी पुस्ताले जरूरी ठान्ने छैन ।